Muftiga Masar oo ka hadlay qaabka looga hortagi karo Fikradda Xaqjirnimada. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Muftiga Masar oo ka hadlay qaabka looga hortagi karo Fikradda Xaqjirnimada.
Muftiga Masar oo ka hadlay qaabka looga hortagi karo Fikradda Xaqjirnimada.
Muftifa dalka Masar Dr. Showqi Calam, ayaa Carabka ku adkeeyay in mabaadi’da horumarka,degenaasha iyo wada noolaashaha uu yahay qiyamka ay diinteyna Islamka ku baaqday,iyadoo uu sheegay in fikradda xagjirnimada looga hortagi karo Saddex shay oo kala ah in si sax ah Diinta wacyiga dhabta ah looga fasiro quluubta dadka,mbaadi’da horumarka iyo nabad ku wada noolaashaha iyo saameynta Taariikhda Islamka ay ku leedahay xiliyada iyo waqtiyada la soo maray.
Muftiga ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu Gobolada ay muslimiinta ku badan yihiin ee konfurta dalka Thailand kula yeeshay siyaasiyiin iyo dad kaloo magac leh oo muslimiin ah,wuxuuna ugu baaqay in si qalbi furan la iska kaashado sidii quluubta muslimiinta loogu abuuri lahaa xaqiiqda dhabta ah iyo waxa ay na farayso Diinta Islaamka ee muqadaska ah.
Muftiga dalka Masar Dr. Showqi Calam, ayaa intii uu joogay dalka Thailand uu booqday goobo Taariikhi ee dadka Muslimiinta ay leeyihiin, wuxuu amaanay doorka Muslimiinta dalkaasi ee ku nool Gobolada koonfureed iyo in ay iskashanayaan horumarinta Diinta Islaamka iyo iyo ka hortaga fikradaha qaldan ee xaqjirka ah.
Next articleMadaxweynaha maamulka Jubbaland oo la kulmay Danjiraha Britain ee Soomaaliya